१२ औँ चितवन महोत्सव हुने, प्रचण्ड प्रमूख अतिथि
११ पुष २०७५, बुधबार १८:०९
चितवन महोत्सव–२०७५ आगामी पुस २५ गतेदेखि नारायणी नदी किनार नारायणगढमा हुने भएको छ । प्रत्येक २ वर्षको अन्तरालमा विसं ०५३ सालबाट हुँदै आएकोे यस महोत्सव १२औँ संस्करण हो । महोत्सवमा ६ वटा विशेष स्टलसहित ५ सयवटा स्टल रहने आयोजकको भनाइ छ । मेला माघ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा नमुना बन्न सफल चितवन महोत्सव यसपटक पनि भव्य हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले बताए ।
नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई मध्यनजर गरी पर्यटन केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको उनले बताए । मेलाको अवसरमा जिल्लाभित्रका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको संक्षिप्त जानकारी तथा तस्बिर समावेश गरी पर्यटक गाइडबुक नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशन गरिने संयोजक प्रधानले बताए । महोत्सव अवधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार उद्यमको विषयमा गोष्ठी हुने भएको छ ।
चितवन महोत्सवमा पोल्ट्री परिसर, अटो परिसर, सूचना तथा प्रविधि परिसर, विद्युत् परिसर, मेड इन नेपाल परिसर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, आदिवासी जनजातिका नमुना घर आदि रहने संयोजक प्रधानले जानकारी दिए । सबै स्टलहरूको कुल रु. ५ करोडको बिमा गरिएको छ । मेड इन नेपाल परिसर आगन्तुकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको आयोजकले जनाएकोे छ । यस परिसरमा नेपालमा उत्पादित चर्चित र उपयोगी वस्तुहरू प्रदर्शनक लागि राखिने भएका छन् ।
क्याम्पाचौरमा फुड फेस्टिभल
चितवन महोत्सवको यस संस्करणमा पनि अघिल्लो संस्करणमा जस्तै फुड फेस्टिभल आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ । पुस २८ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म क्याम्पाचौरमा फुड फेस्टिभल आयोजना हुने भएको छ । विभिन्न खालका परम्परागत खाना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम रहने महोत्सवका संयोजक प्रधानले बताए ।
चितवन महोत्सवको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट हुने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवको सुरक्षाका लागि सुरक्षागार्ड र सिसिटिभीको व्यवस्था गरिनेसमेत संयोजक प्रधानले बताए । उद्योग वाणिज्य संघ चितवन, जिल्ला समन्वय समिति चितवन र भरतपुर महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा महोत्सव हुन लागेको हो ।चितवनको गौरव र गरिमासँग जोडिएको चितवन महोत्सव सफल पार्नु चितवनवासी सबैको दायित्व रहेको भरतपुर महानगरकी उपमेयर पार्वती शाहले बताइन् ।
चितवनका पर्या–पर्यटन झल्कने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनावरहरूको प्रतिमूर्ति समावेश गरिएको कृत्रिम चिडियाखाना रहने, कलात्मक प्रवेशद्वार, बालुवामा कुँदिएको २० फिट लामो माछा, जलयात्रा, खेलकुद गतिविधि, आदिवासी जनजातिको वेशभूषा, कला संस्कृतिको प्रदर्शनी, हरेक दिन सांस्कृतिक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम रहने संयोजक प्रधानले बताए ।
साथै, प्रतियोगितात्मक कृषि उपज पनि रहने आयोजककोे भनाइ छ । बाल उद्यान हटाएर सबै उमेर समूहका लागि लक्षित गरी फन पार्क सञ्चालन हुने भएको छ । बाल उद्यान चलाउँदा भारतीय व्यापारीले पैसा लैजाने भएपछि काठमाडौंकै व्यवसायीलाई फनपार्क सञ्चालनका लागि ७० लाखमा जिम्मा दिइएको संयोजक प्रधानले बताए । साधारण व्यक्तिका लागि रु. ५० र विद्यार्थीका लागि रु. २५ टिकट दर कायम गरिएको छ ।